STAAD - mepụta ngwugwu ihe eji eme ihe bara uru iji kwado nsogbu nrụgide - West India - Geofumadas
STAAD - imepụta ngwugwu a na-akwụ ụgwọ bara uru iji kwado nsogbu nrụgide - West India
N'ime obodo isi Sarabhai, K10 Grand bụ ụlọ ọsụ ụzọ na-akọwa ụkpụrụ ọhụụ maka oghere azụmahịa na Vadodara, Gujarat, India. Mpaghara a enwetaala ngwa ngwa nke ụlọ azụmahịa n'ihi ịdị nso ya n'ọdụ ụgbọ elu mpaghara na ọdụ ụgbọ oloko. K10 goro ndị ọrụ ndụmọdụ VYOM dị ka onye na-ahụ maka ihe owuwu maka ọrụ a wee nye ha ọrụ ka ha chepụta ụlọ na-ezute ma gafere atụmanya kachasị elu nke azụmaahịa Vadodara.
Ihe oru ngo INR 1.2 nke a bilitere mejupụtara okpuru ulo na okuku ala nke 12, ya na okirikiri nke ukwu nke 200,000. Imirikiti ụlọ ndị dị n'ógbè ahụ bụ ndị a gwakọtara ọnụ, na-enwe oghere ọrụ karịa ụlọ ọrụ ndị ọzọ. Agbanyeghị, K10 chọrọ iweta ihe ọhụrụ na mpaghara ahụ, yabụ, a ga-eji K10 Grand maka ọfịs. Nhazi a ga --ebi nkwụsị nke ọrụ ọfịs maka ndị bi.
Kachasị mma imewe nsogbu iji mepụta oghere na-enweghị kọlụm
Iji chepụta ụdị ọmarịcha ụlọ a, VYOM chọrọ iji merie ọtụtụ nsogbu. N'ihi ebumnuche dị elu na nhazi nke ụlọ ahụ, enwere nsogbu dị iche iche n'ụdị nhazi nke nzukọ a kwesịrị ilebara anya. Ndi otu oru a choro imeputa ulo nke nwere ulo elu ato na ihe owuwu di n'etiti. Ihe owuwu a na –ekwupụta maka elu ala isii ma rịawa elu elu ụlọ elu isii. Hazi kọlụm na mbido mgbidi siri ike n'ihi ụdị a pụrụ iche. Na mgbakwunye, onye na-ese ụkpụrụ ụlọ na onye nrụpụta siri ọnwụ na ịnweta oghere enweghị kọlụm n'ọnụ ụzọ nnukwu ọnụ ụzọ. Ihe dị n'etiti etiti ahụ kwesịrị idobe ọrụ niile gbasara ọha na eze, o sikwara ike ịnweta njigide nke ala ọma jijiji na-eme n'ihi na ụdị ụlọ ahụ dọtara ndị agha mpaghara. N'ikpeazụ, ntọala nke ụlọ ahụ bụ ntọala jikọtara ọnụ na nkewa, ya mere ọ dị mkpa iji nlezianya tulee usoro a na-ewu tupu ewu. Ugbu a na ngalaba a na-ewu ụlọ, a na-atụ anya na ụlọ a ga-abụ ihe dị mkpa maka mpaghara ahụ.
Ihe owuwu njikọ iji mepụta akụ na ụba
Mgbe ị na-echepụta ụlọ ahụ, ebumnuche mbụ bụ ịmepụta ụlọ anọ dị iche iche: ụlọ elu atọ na usoro dị n'etiti. Agbanyeghị, mgbe VYOM malitere nyocha nke imewe na STAAD, ndị otu ọrụ ahụ chọpụtara na atụmatụ izizi a abụghị nke akụ na ụba. Kama, ndị otu ahụ jiri STAAD mepụta usoro ọhụhụ na njiri ga-aba uru. Otu oru ngo a kpebiri ijikọ ụlọ niile, chekwaa ego na oge. Ọ dị mkpa ka ndị otu ahụ mee mgbanwe a tupu oge a na-ewu iwu ahụ.
Site na iji ụkpụrụ a rụọ ọrụ, VYOM kpebiri ebe aga etinye ogidi nkwado nhazi. STAAD gosipụtara ndị ọrụ ngo ahụ na ụdị ụlọ ahụ na-achọkarị nke ọma site na iteghete nke iteghete gaa elu, na-eme ka ogidi ndị kwụ ọtọ na-agaghị ekwe omume n'ihi na ha ga-agafe atụmatụ ụlọ ahụ. Ogidi ikiri ụkwụ agaghị arụ ọrụ ma ọ bụ n'ihi na ha gaara agbadata uko ụlọ ndị ahụ ma mebie atụmatụ ọfịs. Kama, VYOM tụrụ aro ogidi ndị kwụ ọtọ maka ala iteghete mbụ na ogidi ndị dị njọ site na itoolu ruo n'ala nke iri na abụọ. Atụmatụ a ga-edozigharị ụlọ ahụ ma ọ bụrụhaala ịnọgide na ihe a chọrọ.
Ntinye nke osisi na ogidi iji dozie esemokwu ahụ
Ihe ozo nyeere VYOM aka imeputa oghere puru iche bu ojiji nke ogwe osisi ndi nwere nsogbu. Osisi ndị ahụ enweghị ike ịdị omimi, ebe ọ bụ na onye na-ahụ maka ụkpụrụ ụlọ chọrọ ụlọ kachasị elu enwere ike. Na mgbakwunye, atụmatụ ahụ chọrọ ka eburu mmiri ahụ na-anya. Osisi ndị a, ya na ogidi na igbutu mgbidi, gbochiri mkpọchi ụlọ ahụ, na-eme ka etiti nke ike na nke siri ike dịrị n'akụkụ. VYOM haziri kọlụm ka ike n'akụkụ wee zuru ike n'etiti ụlọ ahụ. A haziri mgbidi nile, igbado mgbidi na ogidi ka ha wee nwee ike iguzogide 70% nke ike n’akụkụ. Iji nye ohere enweghi kọlụm n'ụlọ ebe a na-anọ efe efe, VYOM ji osisi na paịpụ osisi ukwu nke ụkwụ 20 were were rụọ ụlọ ndị ọzọ.
N'iji STAAD, VYOM chọpụtara na a ka nwere nnukwu mpaghara ọkụ na ụlọ ahụ. Mpaghara a mere na iteghete nke iteghete n'ihi oghere nkewa kọlụm. Floorlọ nke iteghete na-ebu nnukwu ibu, yabụ na ọ dị mkpa ka emeghari ya. Ozugbo ndị ọrụ ngo ahụ ghọtara ọnọdụ a, ndị otu ahụ jisiri ike wepụrụ ndị nwere ike ihu na ọdụ ụgbọ ala nke iteghete site na nkwado na eriri etinyere n'otu osisi ahụ.
Sachekwa oge okike maka oru oru n’uzo n’ihu
Site na iji STAAD, VYOM mezuru ihe osise niile n'otu ọnwa. STAAD chebere ndị otu ọrụ ahụ oge dị ukwuu n'oge a na-ahụ maka nhazi, nke kwere ka ọ bụrụ ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 70 chepụta ya maka atụmatụ ahụ na usoro ikpeazụ n'ime ọnwa. STAAD belatara oge achọrọ iji chepụta ma nyochaa usoro itisa ndị a. Ngwa ahụ kwekwara ka iterasis ndị a na mgbanwe atụmatụ ha jikọtara koodu IS nọ na gburugburu ebe dị mfe iji.
Ihe okike a mezuru ihe nile achọrọ nke onye nrụpụta ulo na onye nrụpụta ya, ụlọ ahụ na-aga n'ihu ugbu a. Buildinglọ ahụ nọ na-eche ogologo oge yiri ihe nlereanya 3D, na oghere azụmahịa bara uru na-enweghị ihe mgbochi ọ bụla. N'ịbụ nke dị n'etiti etiti obodo, K10 Grand ga-eme ka ndị bi na ụlọ nwee ihe ọ bụla ha chọrọ dị nso, gụnyere ebe ịzụ ahịa, ụlọ ọgwụ, ụlọ ahịa na ụlọ nri. Oghere ahụ ga-agụnye mbara ihu ụlọ, oghere ọgbakọ a na-ekerịta ihe, ebe ezumike, ebe a na-eme egwuregwu na ebe a na-ere nri, nke ga-eme ka ọ bụrụ ebe ọrụ ọdịnihu.
A họrọ K10 Grand project ka ọ bụrụ onye mmechi na 2018 Afọ Mmemme Ntanetị Ihe Ntanetị n'ụdị “Structural Engineering”.
Na-ewere ihe nketa ahụ ọzọ, afọ a, ndị otu ndị a erutela aha ndị ikpeazụ nke afọ na Mmemme nke Onyinye onyinye nke 2019 na udi “Structural Engineering”.
FG Consultoria Empresarial maka isi ụlọ ọrụ Patrimonium ọhụrụ, nke a na-ebu 100% na nhazi B B, Lagoa da Prata, Minas Gerais, Brazil
Sterling Engineering Consultancy Services Pvt. Ltd. Maka Dhirubhai Ambani International Convention & Exhibition Center, Mumbai, Maharashtra, India
WSP maka izipu ihe kachasị mma maka okpuru ulo dị n'okpuru akara ngosi Admiralty Arch, London, UK
Site na Shimonti Paul
Previous Post«Previous Etu esi ewulite ulo 3D na Google Earth
Next Post Enweghị mpaghara ndị ìsì nwere ọrụ MosisNext »